FOCUS Beauty မှ ထုတ်လုပ်တင်သွင်းနေသော အောက်ပါ ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ? Snail Wish Whitening Cream FDA No. MN190822680 ? New Skiin All In One Tone Up Cream FDA No. MN191023848 ? New Skiin Whitening Selfie Face Mask FDA No. MN191023849 ? New Skiin Skin Reborn Solution FDA No. IR-F/2020-B1/069 ? New Skiin Foam Cleanser Vitamin C FDA No. MN200630407 ? New Skiin Foam Cleanser Salicylic Acid FDA No. MN200630408 ? New Skiin Foam Cleanser Collagen FDA No. MN200630409 ? New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream FDA No. MN201234582 ? New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion FDA No. MN201234583 ? New Skiin Brightening Exfoliation Toner FDA No. MNA2107000318 ? 24/7 Tooth Balance FDA No. MN200730718 ? Better Skin Coffee Soap Scrub FDA No. MN200428693 ? Beaute Cafe Arabica Coffee 37 in 1 FDA No. IR-F/2020-B1/1716 ? Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue FDA No. MN200529979 ? Ketchup Matte Liquid Lipstick 01 Chocolate FDA No. MN200529981 ? Ketchup Matte Liquid Lipstick 02 Pasta FDA No. MN200529980 ? Ketchup Matte Liquid Lipstick 03 Ketchup FDA No. MN200529982 ? Ketchup Matte Liquid Lipstick 04 BBQ FDA No. MN200529983 ? Ketchup Matte Liquid Lipstick 05 Burger FDA No. MN200529984
FOCUS Beauty မှ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းဖြန့်ချီသော New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. MNA2107000318 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၈,၀၀၀ ကျပ်
Ma Ei Ei Phyu
တနေ့ တစ်လုံး မှန်မှန်သုံးစွဲရုံနဲ့ ဆံသားကနေ ခြေဖျားထိ လှနိုင်ပါတယ်နော် ။ ?
24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးက ဖြူစင်၀င်းပပြီး သွားချိုး၊ သွားကျောက် ကင်းစင်တဲ့ သွားတွေ ရရှိစေဖို့အတွက် အဆင့် ၄ ဆင့်နဲ့ ထိန်းသိမ်း ပေးပါတယ် အဆင့် ၁ Abrasive Silica ဖြင့် သွားချိုး၊ သွားကျောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ် အဆင့် ၂ TSPP (Anhydrous Tetrasodium Pyrophosphate, Sodium Pyrophosphate) ဖြင့် သွားချိုး၊ သွားကျောက်တည်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ် အဆင့် ၃ Sodium Fluoride ဖြင့် သွားပိုးပေါက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ် အဆင့် ၄ အခြားအစွမ်းထက် tincture ၃ မျိုး ဖြင့် သွားဖုံးရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးပါတယ် သွားကျောက်တည်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ? သွားကျောက်တည်ခြင်းဆိုတာ သွားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ တံတွေး နဲ့ Phosphoric Acid အပါအ၀င် ဘက်တီးရီးယားများပေါင်းပြီး ကျောက်တည်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်. သွားကျောက်တည်တဲ့အချိန်မှာ အောက်မှာရှိတဲ့သွားကို သွားပိုးစားလွယ်စေပါတယ်. ဒါ့အပြင် သွားကျောက်ထဲမှ ဘက်တီးရီးယားတွေကလည်း သွားရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ် 24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးတွင်ပါ၀င်သော သွားဖုံးအတွက် ကောင်းမွန်သော tincture (၃) မျိုး၏ ကောင်းကျိုးများ ၁. Myrrh tincture ပိုးသတ်ပေးခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းများကို သက်သာစေခြင်း လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်း၊ ခံတွင်းအနာဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ကို ကုသပေးသည် ၂. Chamomile tincture သွားနာခြင်း နှင့် သွားဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည် ၃. Rhatany tincture ခံတွင်းအမှေးပါးအနာဖြစ်ခြင်းနှင့် လည်ချောင်းရောဂါများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည် Tooth Balance ကပေးမယ့် ကောင်းကျိုးနဲ့ အာနိသင် Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးကို အသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် - သွားကျောက်တည်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်. - သွားကျောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်. - သွားရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ Gingivitis နှင့် Periodontitis တို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်. - သွားဖုံးရောဂါများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်. - သွားကိုဖြူစင်စေပြီး ကျန်းမာအောင် ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်. - ခံတွင်းနံ့ ကောင်းမွန်စေပြီး သွားပိုးစားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်. - ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်. - သွားရဲ့ အသွင်အပြင်ကို လှပနှစ်လိုဖွယ် ဖြစ်လာစေပါတယ်. အခြားပါ၀င်ပစ္စည်း ၁. Xylitol ခံတွင်းရနံ့ကို သင်းပျံ့စေသည်. ၂. ဂရိတ်ဖုအစေ့ အဆီအနှစ် သွားတိုက်ဆေးအရသာကို ကောင်းမွန်စေသည်. သဘာ၀မှရရှိသော တာရှည်ခံပစ္စည်းဖြစ်သည်. ၃. လက်ဖက်စိမ်း အဆီအနှစ် လက်ဖက်စိမ်းတွင် အစွမ်းထက် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း Catechin ပါ၀င်ပြီး သွားဖုံး ရောင်ရမ်းခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးသည်. ၄. Optamint Clovemint Scent ခံတွင်းရနံ့ကို လန်းဆန်းကောင်းမွန်စေပြီး ရနံ့သင်းပျံ့ခြင်းကို တာရှည်ခံစေသည်. Focus Beauty မှ ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းဖြန့်ချိသော Tooth Balance သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No.MN200730718 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၁ဘူး (180g) – ၆၈၀၀ ကျပ်
Focus Beauty မှ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်တင်သွင်း ဖြန့်ချီသော ?New Skiin Foam Cleanser ? သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်. တစ်မျိုးစီအတွက် FDA နံပါတ်တစ်ခုစီကို ပုံမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
Focus Beauty မှ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းဖြန့်ချီသော ???Ketchup Matte Liquid Lipstick??? များသည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်.
Focus Beauty မှ ယိုးဒယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းဖြန့်ချီသော ?Beaute Cafe 37 In 1 Coffee? သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. IR-F/2020-B1/1716 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်.
Focus Beauty မှ တာ၀န်ယူဖြန့်ချီသော ?Garnier Vitamin C Super Essence ? သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. MN190118626 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်.